Category Spain – Cayaaraha dunida
Daawo: Real Madrid oo ku guulaystay koobka La Ligaha.
May 22 2017 Kooxda Real Madrid ayaa xalay ku guulaysatay koobka La Ligaha kadib markii ay ka adkaatay kooxda Malaga. Ciyaartooyda kala ah Cristiano Ronaldo iyo Karim Benzema, ayaa kooxda Los Blancos ku caawiyay guushii xalay ay gaareen kadib markii min hal gool ay u dhaliyeen kooxda. Guushii xalay ay gareen kooxda ayaa ka dhigan mid taariikhi ah, waxaana More...
VIDEO: Qiimeyn 122-gool oo Messi, Suarez & Neymar dhaliyeen 2014/15, kee ugu qurxan.
09 06 2015 Saddexda gool dhaliye ee ka soo jeeda qaarada Latin America ee ka tirsan kooxda Barcelona ee Lionel Messi, Luis Suarez iyo Neymar Jr ayaa xili ciyaareedkan kubbada cagta aduunka heerka koox ahaan taariikh More...
Taariikh: 04-June-2015 Kooxda Barcelona ayaa kabtankeeda Xavi Hernandez u qabatay xaflad layaableh oo ay ku macasalaamaynaysay iyada oo uu Xavi ciyaari doono kulankiisii ugu danbeeyay marka ay Barcelona iyo Juventus More...
MAQAAL: Haddii Uu Guardiola Kooxo Badan Ku Soo Gumaaday In Messi Uu Kooxdiisa Ahaa, Hadda Ayuu Diyaarinayaa Qorshihii Uu Lionel Messi Ku Joojin Lahaa, Kooxdee Ayayse Ciyaarotyda Barcelona Doonayeen?
24 04 2015 Guardiola ayaa ah macalinkii Lionel Messi ka dhigay ciyaartoyga uu maanta yahay, wuxuuna macalinka ree Spain xidigan la soo qaatay waqti uu ku faano oo uu kula guulaystay koobab badan. Messi ayaa ahaa More...
Fernando Torres Oo Aan Weli Iloobin Waqtigii Wacnaa Ee Uu La Qaatay Steven Gerrard.
23 04 2015 Weeraryahanka reer Spain Fernando Torres ayaa sheegay in laacibkii ugu wanaagsanaa ee uu ebid kubada cagta la cayaaray inuu yaha kabtankiisii hore Steven Gerrard. Fernando Torres oo ka hadlaayo waqtigii More...
Tababaraha Xulka Uruguay oo ku farxay bandhiga Luis Suarez ee Barcelona.
22 04 2015 Tababaraha xulka Uruguay Oscar Tabarez ayaa soo jeediyay Luis Suarez inuu hormar weyn ka sameeyay ciyaarihiisa tan iyo markii uu xagaagii hore ku biiray Barcelona. Kadib fadeexadii koobka Adduunka 28 More...